Qof ka warqaba in helitaanka iskuulka noqon kartaa asalka cabsi. Inta u dhaxaysa macno waxa dugsiga si ay u tagaan, sida loo bixiyo waxaa loogu talagalay, iyo waxa la waaweyn ee, munaasabadda bulshada tixgelin aad u koobanahay hadalkay xaqiijin ah waxay noqon kartaa baaritaan dhab ah. Isticmaalka warqad caadadii maamul curinta noqon kartaa go'aan isha understudies qaar ka raadinaya leeyahay dugsiga.
waraaqaha xaqiijinta waxaa caadi ahaan ka kooban ku dhawaad ​​maaddo dugsiga ama doorashada college committeeâ ka € ™ s goosashada. keyd waxaa ka dibna la filayo in stun lahaa kooxda la talinta la isaga ama iyada hal-abuurnimo iyo nooca shaqada. Arrinta been jidkii uu understudies oo hadda ka yar tahay taariikhaha kala duwan sabab iyo miisaanka ma u qoolan yihiin si loo horumariyo shaqadooda ugu fiican. Waayo, xaaladda this, warqad caadadii curinta maamullada waxaa ka mid ah caawimaad aan caadi ahayn. Curinta Bannaanbaxyada waxaa wixii qof oo u shaqeeya warqad caadadii maamul curinta aanu maalin kasta oo aad article shaqsi doesnâ ™ € t cabsi sharci darro ah non-dil ama masuuliyiinta soo horjeeda.
understudies tiro badan yihiin saxafiyiinta warqadda unpracticed iyo Dona € ™ t aqoon meel aan caawimo. In xaalad this, isagoo aan u kasayn oo sheegaya isaga ama iyada gabal sida rikoor tilmaansado badan tahay. Sidoo kale, tan iyo qoraaga xunxun ee aan arkay warqada hadlaya tiro la mid ah waqtiyada in affirmations dugsiga shaqeeyaan ciidamada leeyihiin, isaga ama iyada ayaa masuul ka noqon doono inay soo bandhigaan â € a œoriginalâ € ?? article in, sida caadiga ah, aasaas ahaan waa isku mid sida waraaqaha kale ™ € studentsâ. In xaalad this, hadalkay caadadii curinta maamul gelin karaa khabiir ku ah iyo taabashada bixio on article affirmations ah in go'doomiyo ka dhigooda ay. Iyada oo macluumaadka gudaha iyo dibaddaba ku xiran, qoraaga warqad khabiir iibsanayo by article caadadii maamul curinta waa macquul ahayn in ay soo bandhigaan hadalkay ah in qaadataa ka dib markii warbixin tixraac aad u dhow ama isku xidha lahaa tixgelin negative xaday. Istaagay soocay kooxda waa hab gaar ah si aad u hesho tixgelin, oo loox galo talinta ah, oo istaagay soocay in habka ugu fiican in lagu heli karaa waa hab by kaas oo si aad u hesho dugsiga la qaderiyo.
AKHRI SIDOO KALE: BEST TIPS RAADINTA SHAQADA IYO FIKRADAHA EE ardayda Kuliyada
Waxaa jira faa'iidooyin kala duwan mid ka mid fahmi karo marka aad isticmaalayso hadalkay caadadii curinta maamul u articles affirmations dugsiga. In meesha ugu horeysa, essayist ah warqad sida hadda ayaa si weyn more waayo-aragnimo ku qoran shaqo badan keyd dugsiga sare ee caadiga ah. Isaga ama iyada ayaa intaasi dheer oo uu leeyahay top ah in waxbarashada hoose ee maado waxay doondooneen oo isnâ € ™ t kulma nooca welwelka saftay ah keyd marka la xirrira sida shaqo muhiim ah. Intaas waxaa sii dheer, halka Senior ah ee dugsiga sare waxa ay qaadanaysaa fasalo kala duwan, qaban qaabinayo in dhawr jeer oo laga yaabaa in waqti isku mid ah socday iyo / ama tartamaya in kulan kala duwan iyo layliyada ka baxsan, article caadadii curinta maamul askareeyaan qofka qaba mid ka mid ah shaqada kaliya: in ka koobanahay.
Sida loo hagaajiyo FASALADA AAD EE COLLEGE?
« SIDEE Si aad u heshaan qorayaasha Qormo XIRFADLAYAAL?
QAABKA AASAASIGA IYO QAAB-DHISMEEDKA OF THE Qormo »